Bandhig dhaqameed ka dhacay Uddevalla [Sawirada] | Somaliska
Shalay waxaa magaalada Uddevala ee galbeedka Sweden ka dhacay bandhig dhaqameed weyn oo lagu qabto sanadkasta magaaladaas. maalinta loogu magacdaray Dalabergsdagen ayaa sanadkasta laga xusaa magaalada Uddevala iyadoo Dalaberg ay tahay xaafada ugu caansan magaalada oo ay ku badanyihiin dadka soo galootiga ah.
Jaaliyada Soomaalida ee Bohuslän ayaa bandhig dhaqameed Soomaali ah halkaa ka sameeyay, iyagoo soo bandhigay hidaya iyo dhaqanka Soomaalida. Jaaliyada Soomaalida ee Bohuslän ayaa waxaa ay ku soo bandhigtay Alaabta Hidaha iyo dhaqanka Soomaalida noocwaliba Sida Kurbin, kabaha, cimaamad, derinta , qaado, hangool, Gurbaan, Masaf, Xaarin, Dhiil, Babis, Guntiino iyo Garbasaar iyo waxyaabo badan.
Waxaa kaloo lagu soo bandhigay Raashiinka Soomaalida sida Sanbuuse, Mashmash, Canjeero, Bajiyo, BurKutunbuwe, Zigni, Basbaas Shidni iyo qumbe, Doolsho iyo waxyaabo kale.
Maalinta Dalaberg ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiinta iyo dadka magaca ku leh magaalada Uddevalla. Bandhigii ay jaaliyada Soomaalida ee Bohuslän sameysay ayaa aad u soo jiitay indhaha ka soo qeyb galayaashii ,iyadoo Gudoomiyaha jaaliyada Abshir Macow uu la hadlay saxaafada iyo shirkadihii ka soo qayb galay bandhiga.
June 1, 2011 at 14:56
ASC dhamaan salaan qaali ah ayaan hawada niisomarinayaa. Waan ku faraxay badhigaan dhaqanka somaliada aan daawadau sawirdisa. Waxaan ku gubaniyaa Somali meelkasta ee joogta sidaan dhaqankeeno u soo bandhiga ,
Aad ayey u fiican yihiin jaaliyadaan Soomaaliyeed hanbalyo.
Waan idin salaamay dhamaan, Runtii waa wax aad loogu farxo in la soo bandhigo Hidaha iyo dhaqanka wadankeena waana geesinimo oo ay muujisay Jaaliyada Soomaalida Bohuslän, Waxaana idin dhihi lahaa ku dayda Jaaliyadaan kana qaata fikradaha oo ay ku shaqeyso,Guuleesta Jaaliyada dadaalkiinana sii wada.
wan idin salamay dhaman jaaliyada somaliyed aad aya ugu farxay masha alah waxa aad ugu sifaraxsanahay hidiyaha iyo dhaqankena ina so bandhigten wad ku mahad santihin waxa idin leyahay siwada jaliyada uddevalla ugu hesata waye jaliyadan ilahey cadawgina hajabiyo
August 28, 2011 at 02:21
Run ahaantii waa jaaliyad aad u dadaashay , muujisayna waxa soomaalinimada ay tahay hidaha iyo dhaqankana xushmeysan, waxaan oran lahaa ha lagu daydo jaaliyadan ka dhisan uddevalla ee la yiraahdo jaaliyada soomaalida ee bohuslän, xitaa waxaan akhristay websidka ay leeyihiin jaaliyada oo ah mid aan u riyaaqan shaqsi ahaan, waxaan jaaliyada dhihi lahaa guuleysta mar waliba.